Mwaka yepaNyika - Wikipedia
1 Tsanangudzo dzemazwi anoshandiswa
2 Kuzeya neDendera reNyika
3 Kutsveyama kweAkiso yeNyika
4 Mazuva ekurangarira
5 Latitude neLongitude muChiShona
6 Mazwi eBantu
Tsanangudzo dzemazwi anoshandiswaEdit
Kati - iri rimwe izwi rinoreva mwaka yepanyika - season in English.
Akiso (Axis)- uyu mutsetse uri pakati pechiumbwa unoti zviri kumativi ose emutsetse iwoyu zvinenge zvakafanana nekuenzanza huremu nekuumbwa kwazvo. Takatarisana neEarth, akiso iyi ndiyo monerapo apo panoziririka Earth kamwe pamusi mumwe - izvi zvinokonzera kubuda nokudoka kwezuva. Akiso iyi mutsetse unobatananidza North pole neSouth pole. Earth inonyerereka kana kumonereka paAkiso iyoyi kamwechete pamaawa 24.
Boterero, (Orbit) - iri zita rinoreva nzira inofambwa nayo neEarth apo inenge ichipoterera zuva (sun) kamwe pagore kana kuti pamisi 365. Boterekwa reEarth rine kuumbwa kwakaita denderende. Iri zita rinoshandiswawo kutsanangudza nzira dzinofambwa nedzimwe nyeredzi (planets) padzinopoterera zuva.
Mutsendo (Plane, flat area) izwi rinoreva uso hwakatichechetere kunge pamusoro pemvura. Mutsendo unogonga kunge wakamiswa wakaita mutwi kana kurara kuti sandarara kana kurereka neipi zvayo gonyo. Mutsendo uso hune utandu huviri (2-dimensions)- hwasha nehurefu; mutsendo hauna hudzamu. Earth inoita dendera (revolves) iri pamutsendo wedenderende (elliptical plane) unocheka nepakati pezuva (sun).
Muenzanisi (equator) mutsetse unopangidza panosangana uso hweurungano nemutsendo une munzi wehuremu uye wakarurama neakiso yeurungano yacho. Kureva kuti mutsendo uyu wakaita mutwi neaksio uye kuti wakatakura munzi wehuremu (centre of mass) yeurungano yacho. Iri zita rinoshandiswazve pakutsangudza kuumbwa kweRinopasi, (Earth). Muenzanisi une nhambwe dzakaenzana kubva kuNorth pole ne South pole panzvimbo dzose.
Gonga reMaodzanyemba ndipo papoyindi panoburikira akiso yekuzeya yeRinopasi (Earth), kuri kuMaodzanyemba kweRinopasi, riri divi rakapesana neSouth pole. Kana takatarisa kuMabvazuva, Gonga reMaodzanyemba rinenge riri kuruboshwe.
Gonga reChamhembe ndipo papoyindi panoburikira akiso yekuzeya yeRinopasi (Earth), kuri kuChamhembe kweRinopasi. Kana takatarisa kuMabvazuva, Gonga reChamhembe rinenge riri kurudyi.
Mbariro dzeTaranyika, (Latitude) mitsetse inobatanidza nzvimbo dzine nhambwe yegonyo yakaenzana kana gonyo richipimwa kubva paMuenzanisi zvichienda kuMaodzanyemba kana kuChamhembe kweMuenzanisi. Latitude inoverengwa ichibva paMuenzanisi uyo unopiwa nhamba 0o. Nhamba yelatitude inokwira zvichienda kuNorth pole - nhamba dzichipiwa vara (+), kudzamara dzasvika pa +90o. Nhamba yelatitude inodzika zvichenda kuSouth pole, nhamba dzichipiwa vara (-), kudzamara dzasvika pa -90o. Izvi zvinoreva kuti latitude 20o iri kuMaodzanyemba kweMuenzanisi; latitude -30o kana kuti 30oS iri kuChamhembe kweMuenzanisi. Mepu inotaridza mitsetse yelatitude ichibva kamadokero kuenda kumabvazuva.
Mitambariko yeTaranyika (Longitude) mitsetse inobatanidza nzvimbo dzine nhambwe yegonyo yakaenzana kana gonyo richipimwa kubva paPrime (Greenwich) zvichienda kuMabvazuva kana kuMadokero ePrime Meridian. Longitude inoverengwa ichibva paPrime Meridian iyo inopiwa nhamba 0o. Nhamba yelongitude inokwira zvichienda kuMabvazuva - nhamba dzichipiwa vara (+), kudzamara dzasvika pa +180o. Nhamba yelongitude inodzika zvichenda kuMadokero, nhamba dzichipiwa vara (-), kudzamara dzasvika pa -180o. Izvi zvinoreva kuti longitude +20o iri kuMabvazuva kwePrime Meridian; longitude -30o iri kuMadokero kwePrime Meridian.
Dendera (Revolution) izwi rinoreva kupoterera kunoita Earth ichitendera zuva. Dendera rinotanga nekuperera panzvimbo imwechete - ipapo paratangira ndipo parinogumira kuverengwa. Earth inoita dendera kamwe (1) pamazuva 365 kana kuti pagore.
Kuzeya neDendera reNyikaEdit
Kuzeya. Shoko rokuti kuzeya kweEarth rinoreva kuziririka kunoita nyika paAkiso inobatanidza North pole neSouth pole. Nyika inoita monerapo ichiziririka paAkiso iyoyi. Kana tichitarisa North pole kubva muchadenga nyika inoratidzika ichiziririka kuenda nerudzivo rwunopesana newachi - counter-clockwise. Kana kuri kuSouth pole inotaridzika ichitenderera nerudzivo rwunotevedza wachi - clockwise. Kuziririka kunoita nyika ndiko kunoita kuti kuve neusiku nemasikati; nyika inoziririka kamwe (1) panguva inoita 24 maaawa. Pane ipi zvayo nguva: hafu yenyika inenge yakataira zuva iri muchiedza ari masikati; imwe hafu inenge iri murima kudivi risiri kuwana mirazvo yezuva. Saka panyika panogara paine denderedzwa rinotara muganhu pakati perima nechiedza unonzi Denderedzwa reChiedza - Circle of Illumination.
Dendera. Shoko rokuti dendera rinoreva kupoterera kunoita Earth ichitendera zuva. Earth inoita dendera kamwe (1) pamisi 365,25. Dendera rinotanga nekuperera panzvimbo imwechete - ipapo paratangira ndipo parinogumira kuverengwa - nyika ichizotangazve kutenderera nenzira iyoyo imwechete. Nzira inotenderera nayo nyika tichaidana kuti boterekwa; nzira iyi ine kuumbwa kwedenderende kwete denderedzwa. Nokuda kwekuti boterekwa iri idenderende, nhambwe iri pakati penyika nezuva inosiyana mukufamba kwegore - asi izvi sandizvo zvinokonzera mwaka yepanyika.
Kutsveyama kweAkiso yeNyikaEdit
Sokutaurwa kwaitwa, Earth inoita dendera (revolves) iri pamutsendo wedenderende (elliptical plane) unochekana neboterekwa rinofamba neEarth kamwe pagore. Panguva imwe chete, Earth inoita monerapo ichiziririka paAkiso inobatanidza North neSouth pole. Akiso yeEarth haina kururama pamutsendo wedenderende asi yakatsveyama negonyo re 23.5o. gonyo riri pakati pemutsendo denderende neAkiso yeEarth haichinje; Akiso inoramba yakanongedza divi rimwe uye yakatsveyama negonyo rimwe re 23.5o. Asi chinoshanduka kuti idivi ripi reAkiso riri pedyo nezuva. Divi riri pedyo nezuva rinowana mirazvo yakanyanya - iri divi ndiro rinenge riri mumwaka wekupisa, zhizha (summer), divi riri kure rinenge riri muchando (winter).
Mazuva eZuvaragodza anoitika June 20-21 neDecember 20-21.
Pamazuva aya, nzvimbo dzose dziri kuMaodzanyemba eMuenzanisi dzinowana chiedza kwemaAwa anodarika 12; nzvimbo dzose dziri kuChamhembe kweMuenzanisi dzinowana chiedza chiri kwemahawa ari pasi pe 12. Hafu yekuMaodzanyemba inenge iri mumwaka weZhizha, hafu yekuChamhembe inenge iri mumwaka wechando.
Pamazuva aya, nzvimbo dzose dziri kuChamhembe kweMuenzanisi dzinowana chiedza kwemaawa anodarika 12; nzvimbo dzose dziri kuMaodzanyemba kweMuenzanisi dzinowana chiedza chiri kwemaawa ari pasi pe 12. Hafu yekuChamhembe inenge iri mumwaka weZhizha, hafu yekuMaodzanyemba inenge iri mumwaka wechando.
Husiku Hwakaenzana Equinox
Mazuva eHusiku Hwakaenzana anoitika March 20-21 neSeptember 20-21. Pamazuva aya Denderedzwa reChiedza rinocheka Gonga reChamhembe neGonga reMaodzanyemba - mativi ose eAkiso anenge ari nhambwe dzakafanana kubva kuzuva - hapana divi rinenge riri pedyo nezuva kudarika rimwe. Zvakare hapana divi reAkiso rinenge rakanongedza kune zuva. Pamazuva aya nzvimbo dzose dziri panyika dzinowana husiku hwakaenzana, hwakareba 12 maawa - saka mazuva aya achinzi Husiku Hwakaenzana- equinox.
Kubva pana March 20-21, nguva yechiedza inoenda ichireba kuhafu yekuMaodzanyemba - kutanga kwenguva yeChirimo (spring) kunzvimbo dziri kuMaodzanyemba kweMuenzanisi. Kunzvimbo dziri kuChamhembe, nguva yechiedza inenge ichiderera, kutanga kwenguva yeMatsutso (autumn) kunzvimbo idzi. Pakutsutsa.
Kubva pana Sep 20-21, nguva yechiedza inoenda ichiderera kuhafu yekuMaodzanyemba - iyi inguva yemwaka weMatsutso (autumn) kunzvimbo dziri ku[[Maodzanyemba kweMuenzanisi. Kunzvimbo dziri kuChamhembe, nguva yechiedza inenge ichireba, nguva yemwaka weChirimo kunzvimbo idzi.
Latitude neLongitude muChiShonaEdit
Mbariro dzeTaranyika. Taona kuti mwaka yepanyika inosiyana zvichienderana nekusiyana kwelatitude; nokudaro pfungwa iri kuti tsambamba idzi dzidanwe kunzi Mbariro dzeTaranyika mwaka muChiShona. Mwaka inenge iri kulatitude dzekuMaodzanyemba inopesana nemwaka yelatitude dzekuChamhembe. Nzvimbo dziri mulatitude dzemaTropics munova mune nyika yeZimbabwe, mwaka haiverengwe kusvika pamwaka mina. Izvi zvinokonzerwa nechiitiko chokunge zuva richiwanikwa nemurazvo une simba panguva zhinji dzegore.
Nzvimbo dziri kunze kwelatitude yeTropics dzinoverenga mwaka mina inoonekwa zvakati tsvikiti. Mwaka iyi ndiyo chando; chirimo, zhizha, matsutso inova winter, autumn, summer ne spring kuEnglish.
Mutambariko weTaranyika. Nguva yezuva inosiyana zvichienderana nelongitude, saka zvakafanira kuti longitude inzi Mutambariko weTaranyika. Nzvimbo dzakasiyana dzine nguva dzakasiyana zvichienderana nelongitude yenzvimbo yacho. Kune mipanda yenguva (time-zones) yakarongeka ichitevedza rudzivo Mabvazuva-Madokero yakatarwa pamitemo yenguva Pasirose. Nguva idzi hadzizoteveri longitude kuti gedye-gedye nokuda kwekusiyana kwemitemo yenyika dzePasirose panhau yeMipanda yenguva.
Tamboona kuti longitude inoverengwa iri 0-180oE tichienda kuMabvazuva uye 0-180oW tichienda kuMadokero. Zvinoreva kuti gonyo relongitude rinohwerengedzwa kusvika pa360o. Taona zvakare kuti nyika inoziririka kutenderera kamwe paawa 24h - mahawa 24h anoenderana ne 360o. Panofambwa 15o yoga-yoga nguva inochinja neawa imwe (1h).
Nyika yeZimbabwe iri murumana rwehunhungo (longitude) +30oE. Pose panochinja muyeranhamo ne 15o, nguva inochinja neawa rimwe (1h). Nokudaro Zimbabwe inopiwa nguva yakawedzerwa 2h (maawa 2) zvichienzaniswa nenguva iri paPrime Meridian. Somuenzaniso kana nguva iri paPrime Meridian iri pa 06:00hrs, nguva yeZimbabwe inenge iri pa 08:00hrs. Nguva iri paPrime Meridian inonzi Greenwich Mean Time (GMT). Nokumwe kutaura nguva yeZimbabwe inodanwa ichinzi GMT + 2hrs.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mwaka_yepaNyika&oldid=91868"
Last edited on 27 Kukadzi 2022, at 20:28
This page was last edited on 27 Kukadzi 2022, at 20:28.